How to Root HTC Incredible S (S-ON) - IT-KOKO
ကျွန်တော့ဖုန်းလေးကို အမြစ်လုပ်လိုက်ပါပြီ။ တော်တော်လေးကို လုပ်လိုက်ရတယ်။ မသိတော့လဲ နဲနဲကြာတာပေါ့။ ပြီးတော့ HTC ဆိုတော့ နဲနဲ လုပ်ရတာ ခက်တယ်။ အမြစ်လုပ်ပြီးတော့ တော်တော်လေးကောင်းသွားတယ်။ လှသွားတယ်။ မြန်မာလိုမြင်ရတယ်။ မြန်အောင်လုပ်လို့ရသွားတယ်။ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့ရသွားတာပေါ့။ အခုမှပဲ တကယ့် ကျွန်တော့ ဖုန်းအစစ် ဖြစ်တော့တယ်။ အခုတလော ပျော်နေတဲ့ထဲမှာ အဲဒါတွေလဲပါတယ်။ ဖုန်းကို ကလိနေတာနဲ့ အချိန်ကုန်လို့ကုန်သွားမှန်းကို မသိလိုက်ဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော့ ဖုန်းလေးကို Root လုပ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး အရှင်းဆုံးပြောပါ့မယ်။ အတွေ့အကြုံရော၊ ဖတ်ထားတာတွေရော အားလုံးပေါင်းပြီး ဒီပိုစ့်ကို ရေးပါ့မယ်။
အရင်ဆုံး root လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် Android version နဲ့ Phone Model ကို သိအောင်လုပ်ရပါမယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ HTC Incredible S Android 2.3 ကို သုံးပါတယ်။ အဲ့ဒါသိပြီဆိုရင်တော့ ဆက်လုပ်လို့ရပါပြီ။ နောက်တစ်ဆင့်မနေနဲ့ကတော့ root လုပ်ရင် ဘာအကျိုးအဆက်တွေ ရနိုင်လဲဆိုတာပါ။ အရင်ဆုံးသိရမှာကတော့ WARRANTY ပျက်သွားပါလိမ့်မယ်။ root မလုပ်ခင် ဒါကိုအရင်ဆုံး စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ် root လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ဆင့်သွားလို့ရပါပြီ။
အခုအပိုင်းကနေစပြီးတော့ သေသေချာချာလေး ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ အရေးကြီးသလို အမှားခံလို့မရလို့ပါ။ လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးတွေ မှားသွားရင် ဖုန်းပျက်သွားတတ်လို့ပါ။ ပျက်သွားရင်တော့ အိုင်တီကိုကို တာဝန်မယူနိုင်ကြောင်းပါ။
ရှိပြီးသား Data တွေကို backup လုပ်လိုက်ပါ။ Astro File Manager နဲ့ Titanium Backup ကတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Astro File Manager နဲ့ လုပ်လိုက်ပါတယ်။ SD card ထဲမှာပဲ အားလုံးကို save ထားလိုက်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ SD card ကိုလဲ computer မှာပါ copy ထားလိုက်ပါ။
အားလုံး backup လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ driver တစ်ခုသွင်းရပါမယ်(window only)။ download here။ ပြီးရင် သွင်းလိုက်ပါ။ နောက်တော့ ကိုယ့်ဖုန်းက S-ON လား S-OFF လားဆိုတာ စစ်ရပါမယ်။ ဘယ်လိုစစ်မလဲဆိုတော့၊ ဖုန်းမှာ Settings > power > ပြီးရင် fast boot ကို unchecked လုပ်လိုက်ပါ။ နောက်တစ်ခုကUSB debugging ပါ enable ထားပါ။ (Settings » Applications » Development » USB debugging)။ ပြီးရင်တော့ ဖုန်းကို recovery နဲ့ဝင်ပါမယ်။ Power off လိုက်ပါ။ ပြီးရင် volume down + power ကို တွဲပြီးနှိပ်ထားလိုက်ပါ။ အဲမှ ရှာလိုက်ပါ။ S-ON or S-OFF။ ပြောသာပြောတာပါ။ ဘာဖြစ်ဖြစ် root လုပ်လို့ရပါတယ်။ များသောအားဖြင့်က HTC တွေက S-ON တွေပါ။ S-ON ကို S-OFF ဖြစ်အောင် အရင်ဆုံးလုပ်ရပါမယ်။
ဒီမှာ နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် download ကို နှပ်ပါ။ Beta key box ကျလာရင် တော့ လိုတာလေးတွေကို ဖြေလိုက်ပါ။ serial key ကတော့ phone battery ကို ခွာပြီးကြည့်လိုက်ပါ။ အားလုံးပြီးရင် Beta key ရပါပြီ သေသေချာချာ မှတ်ထားပါ။
http://revolutionary.io မှာ တုန်းက download ထားတဲ့ Revolutionary 0.4pre4 ကို သွားပါ။ zip ကို ဖြေလိုက်ပြီးရင်. revolutionary.exe ကို run လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဖုန်းကို Computer နဲ့ ဆက်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် beta keys ကို ထဲ့ပေးလိုက်ပါ။ both upper- and lower-case letters တွေကို သတိထားပါ။ အားလုံးမှန်အောင်ထဲ့လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ Revolutionary က temp root လုပ်ပြီး S-OFF လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ပြီရင် စက်က reboot ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
အခုဆိုရင် ဖုန်းက S-OFF ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒါဆို ကိုကြိုက်တဲ့ custom rom ကို သွင်းလို့ရပါပြီ။ နည်း ၂နည်း ရှိပါတယ်။ Method via Recovery နဲ့ Method via ROM Manager ပါ။
ပထမနည်း Download Custom ROM, ကျွန်တော်ကတော့ CyanogenMod နဲ့ သွင်းပြပါ့မယ်။ Download ပြီးပြီဆိုရင် SD card ထဲကို ထဲ့လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ volume + power ကို နှိပ်ပြီး တော့ ClockworkMod Recovery ကို ဝင်လိုက်ပါ။ backup and restore လုပ်ချင်ရင် လုပ်လိုက်ပါ။ Wipe data/factory reset လုပ်ပါ။ Wipe cache partition လုပ်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Install zip from sdcard ကိုရွေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Choose zip from sdcard။ ခုနက SD card ထဲကို ထဲ့ထားတဲ့ Custom ROM ကို ရွေးလိုက်ပါ။ install တာပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ +++++Go Back+++++ လုပ်ပြီး Reboot system now လုပ်လိုက်ပါ။ စက်ပြန်တတ်လာပြီဆိုရင်တော့ အားလုံး အိုကေသွားပါပြီ။ မတတ်လာဘူးဆိုရင်တော့ တစ်ခုခုမှားနေလို့ထင်တယ်။ အစကနေ ပြန်လုပ်ပါ။
ဒုတိယနည်း ကလွယ်ပါတယ်။ Market မှာ ROM Manager ဆိုပြီး ရှာလိုက်ပါ။ ပြီးရင် သွင်းထားပါ။ နောက်ပြီးတော့ ကိုသွင်းချင်တဲ့ Custom ROM ကို down ထားပါ။ ဒီမှာ ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျွန်တော့ ဖုန်းအတွက်ပါပဲ။ အမျိုးအစားမတူဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဟာကို Google လိုက်ပြီး download ထားပါ။ နောက် ph SD card ထဲကို ထဲ့ထားပါ. zip အနေနဲ့ပဲ ထဲ့ထားလိုက်ပါ။ ပြီရင်တော့ ROM Manager ကနေ သွားပြီ install from SD card ဆိုပြီ လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် သွင်းထားတဲ့ Custom ROM ကို ရွေးလိုက်ပြီး OK လိုက်ရင်. reboot သွားပြီရင် install ပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါမတိုင်ခင် ဘာပဲ backup ပြောပြော လုပ်လိုက်ပါ။ တစ်ခုခုမှား ရင် ပြန်ပြီးလုပ်လို့ ရတာပေါ့။ reboot ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ အားလုံးပြီးပါပြီဗျာ။ ပုံလေးတွေက လုပ်ရတာ အစဉ်မပြေလို့ စာတွေကြီးပဲ ရေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။ အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ လိုအပ်လို့ရှိရတော့ Comment ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်။
English လို ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
အသေးစိတ်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က လင့်တွေမှာရှိပါတယ်။